Israa'iil iyo Falastiiniyiinta - BBC News Somali
Posted at 5:11 1 Oktoobar 20215:11 1 Oktoobar 2021
Muxuu yiri Yuhuudigii ugu danbeeyey ee isaga baxay Afghanistan?
Qofkii ugu dambeeyay ee Israa'iil u dhashay ee ugu danbeeyey ee isaga baxay Afghanistan, wuxuu sheegayaa in Israa'iil aysan aaminin Mareykanka.
Posted at 13:21 4 Agoosto 202113:21 4 Agoosto 2021
Ra'isul wasaaraha Israel Naftali Bennett ayaa jeediyay hadal kulul oo ku wajahan Iran, isaga oo cambaareeyay weerarkii lagu qaaday markab shidaal oo ay leedahay shirkad Israeli ah meel u dhow xeebaha Cumaan, usbuucii hore.
Posted at 10:08 20 Luulyo 202110:08 20 Luulyo 2021
Shirkad jalaato iyo Ra'isulwasaaraha Israa'iil oo isku haya dhulka Falanstiin laga hasyto
Shirkadda Ben & Jerry's oo sameysa Jalaatada ayaa sheegtay inay joojinayso iibinta jalaatada ay ku iibinayaan dhulka Falastiin ee Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus.
Posted at 7:16 20 Luulyo 20217:16 20 Luulyo 2021
Muxuu yahay barnaamijka wax basaasa ee Israa'iil ee talefoonada lagu jabsado?
Shikad laga leeyahay Israel, ayaa la ogaadey iney basaaseysay tiro badan oo dad caan ah, iyadoo isticmaaleysa barnaamijka gaara oo akhbaarta lagu xado, taasoo ay ka iibiyeen madax kaligii taliyeyaal ah.
Posted at 5:07 23 Juunyo 20215:07 23 Juunyo 2021
Afhayeenka ururka la magac baxay "Dowladda Islaamka", Abuu Xamsa al-Qurashi, ayaa cod uu baahiyay Talaadadii u muuqday mid ku baaqaya in Falastiiniyiinta ay ka hortagaan Xamaas.
Posted at 11:14 16 Juunyo 202111:14 16 Juunyo 2021
Israel ayaa sheegtay inay bilowday duqeymo dhanka cirka ah oo ka dhan ah bartilmaameedyada Xamaas ee marinka Gaza, ka dib markii buufimoyoyin qarax sameeyaa kaga yimaaddeen dhanka Gaza.